Maninona no mivavaha, izao tontolo izao maneran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Fiteny hafa- Alemanina- Anglisy- Italiana- Française- Español- Português- Holandey- Danemark- Finnish- Soedoa- Norvezianina- poloney- Biolgara- Rosiana- Katalana- Basque- Irlandey- Welsh- Islandey- Grika- Gaelika Scottish- Tiorka- Slovenian- Okrainiana- romanianina- Armeniana- Azerbaijani- Litoanianina- Belarosiana- Estonianina- Georgia- Hongria- Galician- Bosnian- Makedoniana- Albaney- Slovak- Czech- Kroasia- Corsican- Kurdear (Kurmanji)- Latina- esperanto- hebreo- Persiana- Arabo- Japoney- Koreana- Shinoa (nentim-paharazana)- Shinoa (Simplified)- Filipino- Indonezianina- Latvian- Vietnamianina- Maltais- Thai- Hindi- Afrikaans- Malay- Swahili- Creole Haitian- Bengali- Java- Khmer- Lao- Maori- Marathi- Mongoliana- Nepali- Punjabi- Somali- Tamil- Kazakh- Malagasy- Hawaiian- Kyrgyz
"Raha mivavaka ianao dia tsy tokony hionona amin'ny teny tsy misy dikany toa ny Jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Mieritrereta fa ho re izy ireo raha miteny be izy. Aza manao toa azy, satria fantatry ny rainao izay ilainao ary eny dieny tsy mbola mangataka aminy ianao ”(Matio 6,7: 8 Fandikana ny Genève vaovao.
Nisy olona nanontany hoe "Nahoana aho no tokony hivavaka amin'Andriamanitra rehefa fantany ny zava-drehetra?"
Jesosy dia nanao ny fanazavana etsy ambony ho fampidirana ny Vavaky ny Tompo. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny sainy dia na aiza na aiza. Raha manohy mangataka zavatra avy amin'Andriamanitra foana isika, tsy midika izany fa mihaino azy tsara Izy. Ny vavaka dia tsy natao handraisana ny sain'Andriamanitra. Efa eo ny sainy. Fantatry ny rainay ny momba antsika rehetra. Nilaza i Kristy fa mahafantatra ny eritreritra, ny filantsika, ny faniriantsika.
Koa nahoana raha mivavaka? Amin'ny maha ray ahy, tiako ny holazain'ny zanako amiko rehefa mahita zavatra voalohany izy ireo na dia efa fantatro aza ny tsipiriany rehetra. Tiako ny lazain'ny zanako amiko raha faly izy ireo na dia hitako aza ny fientanentanany. Te hizara ny nofinofinao eo amin'ny fiainana aho, na dia afaka maminavina ihany aza aho. Amin'ny maha-zanak'olombelona ahy dia aloka fotsiny aho amin'ny fisian'ny Andriamanitra Ray. Tsy mainka va ny tian'Andriamanitra hizara amin'ny hevitra sy ny fanantenantsika!
Efa henonao ve ilay lehilahy nanontany namana kristiana hoe maninona no nivavaka izy? "Tokony hahalala ny marina ve ny andriamanitrareo ary mety ny antsipiriany rehetra?" Namaly ny kristiana hoe: "Eny, mahalala azy izy. Nefa tsy fantatry ny fahalalako ny fahamarinana sy ny fahitako ny antsipirihany." Tian'Andriamanitra ny hevitsika sy ny fomba fihevitsika. Tiany ho anisan 'ny fiainantsika ary ny vavaka dia tafiditra ao anatin'izany fiahiana izany.
Ry Havana malala, Raintsika any an-danitra, misaotra anao fa teo foana aho, mihaino mandrakariva, manisy famindram-po hatrany, vonona hamela heloka. Misaotra anao nizara ny entanay sy ny fifalianay aminao tamin'ny vavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amena